Robotrading noma Ukuhweba imanuwali - Blockchain Izindaba
Robotrading yinqubo usebenzisa iqoqo imiyalelo for ukubeka amabhidi ukuthenga noma ukuthengisa ukwabelana, imali, noma cryptocurrency. Isethi imfundo kusekelwe izinkomba ezahlukene emakethe, kuhlanganise intengo, isikhathi, ivolumu, nabanye. Lapho abahwebi bakhathele futhi abanayo isikhathi ukudayisa ngesandla, bacabanga ukuthuthela robotrading. Kodwa embundwini ukungena kule ndawo impela high, ikakhulukazi umuntu ongenazo imfundo ekhethekile zezimali noma lobuchwepheshe.
Mayelana kwathatha robotrading nesikhathi khulula
Uma zimali yangasese igxile inzuzo, uyaqonda umehluko phakathi ukuhweba mathupha futhi ezenzakalelayo, futhi anezinye amakhono izinhlelo, kufanele okungenani ungacabangeli ashintshele komzila othomathikhi. Ukuphumelela nobubanzi umsebenzi zikhulisa: abantu nje enze kakhudlwana futhi kangcono. Ngu ukuhweba ngokuzenzakalela ungafunda Ukuhwebelana ngaphezulu, ukusebenzisa amathuluzi kanye namasu. Kodwa akusho ukuthi awudingi ukuqapha ukusebenza othomathikhi anjengezixhumo imanuwali. Ungakhohlwa mayelana ukuqapha, kungcono njalo kubalulekile hlalani nivulé amehlo.
Noma yimuphi ukuhweba, kungakhathaliseki ibhukwana noma algorithmic, kudinga umzamo ukuzibandakanya ngokugcwele enqubeni. Uma ufuna ukuzuza, kufanele uchithe isikhathi esiningi ukuhweba. Kungakuhle, kufanele ube usuku lonke ukusebenza, uma ungeke ukwazi nje ukubhala ikhodi bese uya phumula. Kunjalo, ngeke unamathisele nje endaweni eyodwa, uyokwazi ukuhamba emhlabeni wonke kodwa kuphela uma zihlale online. Kodwa-ke neze mayelana elele hammock ngaphansi wesundu izinsuku.
Mayelana Fiat imali futhi cryptocurrency
Ngamagama izinhlelo, akukho mehluko phakathi lokho oyikho zokuhweba, Fiat imali noma cryptocurrency. Into eyinhloko ukudala okuhle umakhenikha yokuhweba uhlelo. Kukhona ama-algorithm ukuthi ingasetshenziswa ngempumelelo ukuthi nge zezimali ezivamile, cryptocurrencies, noma isitokwe ukwabelana. Akukona ebalulekile ukuthi ithuluzi sisetshenziswa ukungena. Yini ndaba kuyinto yini noma cha imithetho kumumethwe algorithm ukuchaza ukuziphatha ithuluzi akhethelwe. Ngakho nanku umbuzo kokuqala ukuhweba umqondo ekwakhiweni kanye nesu. Noma kunjalo, lapho i-algorithm okhula, ukuziphatha ethile ukuhweba fa kunakwe.
mayelana nezinzuzo, izingozi futhi amaphutha oyisiwula
Inzuzo enkulu yokuhweba okuzenzakalelayo phezu ukuhweba bhuku kukhona ukuntuleka imizwa. Abantu ngokuvamile izinqumo ezisekelwe imizwa nemizwelo futhi awusebenzi ngaso sonke isikhathi abe nethonya elihle Imiphumela, ikakhulukazi zikhathi ezibucayi. Ngokungqubuzanayo, algorithm nje, elona lisebenza ngaphandle imizwelo noma injabulo; akuthathi izinqumo ezinokuxhamazela yezandla neminye ku isu ngokuqinile esibekiwe. Futhi uma algorithm iqalisiwe, abadayisi ayikwazanga ukungenela bakhulumele ingane futhi ushintshe okuthile.
Kunjalo, kunobungozi, futhi ngokuvamile izingozi emakethe. Umqondo algorithm ukuhweba zingayeka abahola esikhathini esithile lapho imicimbi ezingalindelekile kanye nezibhelu ezilandela lokhu kwenzeke emakethe. amarobhothi amaningi awukwazi ukulandelela isignali. Uyoba ukulandelela lezi zimo futhi ushintshe amarobhothi yakho ngesikhathi noma vimbela kubo. Kukhona ingozi encane ukuthi exchange izohluleka wena.
Ngaphezu kwalokho, program angase ngezinye izikhathi benza amaphutha silly kodwa sina. A algorithm elula has izindleko futhi intengo. Kunjalo, ukuze senze imali, intengo yakho kufanele kube ephakeme kunaleyo izindleko zakho. Uma ukudida kubo, irobhothi kwakho kuyoba ezingenanzuzo. Ngokuvamile newbies nazo le nkinga. Ngenxa yalokho, iphutha silula ngasiphi isigaba kuholela ukulahlekelwa ezinkulukazi.
Noma yimuphi emakhono latsite kuyoba usizo kakhulu. Ngokuthi iyiphi emakhono latsite, ngokuyinhloko kusho ulwazi oluhle wezibalo kanye logic. Kuyinto kabanzi mayelana ubuhlakani obucacile nokuphawula kuvisisa indlela ukubhala esisemthethweni ukuhweba umthetho kunokuba okuningi okuphathelene nezibalo ngoba awudingi yimuphi kugucuka algebraic at kusaqalwa. Kukhona umehluko ocacile phakathi umuzwa indlela ukudayisa futhi ikghono lokuhlathulula logic yokuhweba isethi esisemthethweni izenzakalo nezenzo. Ngalesi isinyathelo, sidinga ulwazi zezibalo. Futhi, amakhono kanye nokuhlela umyalo Uhlelo oluyisisekelo izilimi (Ngokwesibonelo, “C”) kubalulekile.
Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi beveza isu inzuzo, emangalisa nokusebenza ukuhweba umqondo. Wena bayasikala kunoma imaphi Uhlelo zezibalo ukumodeliswa, Ngokwesibonelo, Mathcad. Khona-ke, ubheka idatha, ukwakha imodeli idatha, futhi wenze izibalo edingekayo. Ngemva kwalokho, ufaka zonke amakhonishani zimali eziseceleni ezikhokhiswayo, futhi konke usebenza emihle. Konje, anisoze, ungalilahli izinyane ngokwakho, zihlanganisa zonke izinkokhelo, kungcono kubalulekile. Kodwa-ke uyaqaphela ukuthi nokusetshenziswa kobuchwepheshe umbono wakho udinga imali engaphezu kuka-ungakwazi imali lo mbono.
Kwasukasukela, omunye zimali yangasese wenza omangalisayo ukuhweba irobhothi, okuthiwa Panda. It elakhiwe i 8,000% ukubuyela phakathi izinyanga ezintathu cishe akukho ingozi kokuqala. okuxoxwe Panda kwaba hyped okuningi, kodwa ngempela wasebenza kahle. Kodwa le nto yayiyimbi ukuthi irobhothi wenze lesi imali inhlokodolobha lesekucaleni 1 ayizinkulungwane, ngenkathi ukusekelwa ngenyanga yonke ingqalasizinda lobuchwepheshe edingekayo ukusekela izindleko iphrojekthi bezungeza 10 ayizinkulungwane. Ngakho, kwaba ekuqaleni iphrojekthi ezingenanzuzo, ngoba ayikwazanga ngisho ukumboza zonke izindleko ugesi, amaseva enamandla namakhompyutha enifeza izibalo iphrojekthi Ikakhulukazi, umuntu kufanele akhumbule ukuthi nomholo irobhothi akuzona okusezingeni eliphezulu njalo, kodwa imali yesondlo kumele ikhokhwe kancane kancane. Ngakho, kubalulekile ukubala nje kuphela indlela ukuze uthole, kodwa futhi kungakanani kufanele uchithe ukuze uthole.
imali Mayelana okusheshayo
Kuyacaca ukuthi amarobhothi kungenziwa amisiwe ehlukile, incike ngevolumu ukuhweba, lokho isebenzisa kanye loans asetshenziswa lapho ukuhweba, ngabe imali uwedwa noma egameni kothile, njll. Kunezindlela eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Kodwa ngokuvamile, ungakwazi ukuthola kancane kancane minyaka yonke cishe akukho izingozi ngu ngidayisa iminyaka eyishumi ngesikhathi 10% ngonyaka, noma ungase uzame ukudayisa unyaka owodwa ngesikhathi 100%.
Kodwa kukhona umthetho ezimakethe zamasheya ukuthi ngeke bakwazi ukukopela - ayanda ezingaba ukubuya, aba maningi ezingaba ingozi. Kuyinto ngokuqina umthetho ukuze kwaneliswe isidingo iyona. Ngakho, uma ubale imali enkulu, balungele ukulahleka elikhulu. Lo mthetho akunakugwenywa futhi kufanele kunakwe lapho kuziwa inzuzo ngokutshalwa kwezimali (RIO) noma algorithmic ukuhweba nenzuzo.
Mayelana amapulatifomu newbies
Kukhona ezinye amapulatifomu ukuthi sivumele noma ubani ukuba ukudayisa ngaphandle amakhono Ukuhweba. Ngokwesibonelo, Libertex iyingxenyekazi edume kakhulu, kodwa kukhona nabanye abaningi. Kuyinto indlela kuhle newbie ukuzama futhi ubone ukuthi konke imisebenzi.
Top 8 Kuhle Isicelo mobile for Cryptoсurrency
Uma nikela okuningi ...
Omunye Japan enkulu ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 24 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Inkokhelo opharetha Umugqa enqaba Bitcoin